Solontenan’ny Pnud, Violet Kakyomya : « Tsy tokony hisy ny Ni… ni amin’ny fifidianana » | NewsMada
Solontenan’ny Pnud, Violet Kakyomya : « Tsy tokony hisy ny Ni… ni amin’ny fifidianana »
Vita hatreo izany fa tsy maintsy ho kandidà ny filoha teo aloha, Ravalomanana sy ny filohan’ny Tetezamita, Rajoelina. Mazava ny hafatra ho an’ny mpitondra sy ny vahoaka.
“Manomana miaraka amin’i Madagasikara ny fifidianana ny eo anivon’ny Pnud amin’izao fotoana izao. Tokony ho amin’ny taona 2018 ny fifidianana filoham-pirenena raha arahina ny lalàmpanorenana ary tsy hisy intsony ny fanilihana kandidà toy ny niseho tamin’ny taona 2013, nanaovana ny Ni… ni”, hoy ny solontena maharitry ny sampandraharaharahan’ny Firenena mikambana (Pnud), Violet Kakyomya, tetsy Andraharo, omaly. Ankoatra izany, notsiahiviny indray fa manohana tanteraka antsika eo amin’ny ady atao amin’ny kolikoly koa ny Pnud.
Midika izany fa tsy azo ihodivirana ny fahafahan’ny rehetra milatsaka hofidina amin’io fifidianana amin’ny taona ho avy io. Tsy tokony hatao resabe intsony ny fitanisana ny “fifanarahana Cotonou” ka tsy ahafahan’ny mpanongam-panjakana mirotsaka hofidina na koa ireo mpanao politika nanana olana eny anivon’ny fitsarana. Tahaka izany koa ny mety ho fitadiavan’ny fitondrana hirika amin’ireo lalàna samihafa, toy ny lalàn’ny fampihavanam-pirenena sy ny lalàna hafa, hisakanana ankolaka na mivantana ny fahazoan’ny rehetra tsy ankanavaka mirotsaka hofidina. Tsy tokony ho tonga amin’izany ny raharaha amin’izao hiatrehana ny fifidianana izao.
Nomen’ny Amerikanina lesona…
Araka izany, efa ny andry iray lehibe maneran-tany mihitsy izany izao no maneho izany hevitra sy toromarika izany, mba tsy ilazana hoe baiko, ny amin’ny tokony hampalalaka ny fifidianana. Efa nialohavan’ny fanambaran’ny Amerikanina, tamin’ny alalan’ny masoivohony Robert Yamate, ny 30 jona teo izany, ny amin’ny tokony hanaovana fifidianana malalaka sy madio ary andraisan’ny rehetra anjara sy tsy anilihana na iza na iza. Noraisiny ho ohatra ary tokony ho fakan-tahaka ho antsika sy nanomezany lesona ny demokrasian’izy ireo tamin’ny fifidianana tany Etazonia farany teo…